သူမရဲ့ ပုံတွေကို Photoshop တွေနဲ့ပြင်ထားတာကြောင့်သာဖြစ်ပြီး အပြင်မှာ အခုလိုမဟုတ်ကြောင်း ပုံနဲ့တကွ ရှင်းပြလာတဲ့ အဘသမီးလေး ရွှေရူပါဦး. – Maythadin
သူမရဲ့ ပုံတွေကို Photoshop တွေနဲ့ပြင်ထားတာကြောင့်သာဖြစ်ပြီး အပြင်မှာ အခုလိုမဟုတ်ကြောင်း ပုံနဲ့တကွ ရှင်းပြလာတဲ့ အဘသမီးလေး ရွှေရူပါဦး.
May Thadin | October 11, 2021 | ကြားသိသမျှ | No Comments
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ မော်ဒယ် ရွေရူပါဦးကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ မော်ဒယ်တစ်ယောက်လို့သူမကိုယ်သူမ ပြောနေကြပေမဲ့ ပရိသတ်တွေ.ကတော့ သူမကိုတပ်ချစ်သူလို့ပဲ သိထားကြပါတယ်နော်.တစ်ချို့.ဆိုရင်သူ.မကို ခုမှမြင်ဖူးတာ.ဆိုပြီးတောင် ရေးသားနေကြပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်းတုန်း.ကတော့
သူမကို အဘတွေ.က စီစဉ်ပေးမှုတစ်ခုကြောင် ချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ လူတွေ..အကြား ပွဲဆူသွားရပြန်ပါ.တယ်နော်..အခုလဲ လူပြောများ.နေတဲ့ သူမရဲ့ခြေထောက်ဟာ
လူတွေ ထင်နေသလို ဆင်ခြေထောက်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေနဲ့.တကွ ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်နော် သူမရဲ့ ရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာများကို ပရိသတ်သိအောင် ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်
“ဆင်ခြေ.ထောက်မ” ဆိုသော မသမာသူ.တွေလုပ်ကြံ.ထားတဲ့ကိစ္စကို ရွှေ ပထမဆုံးနဲ့.နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်း.ချင်ပါတယ်…
သိက္ခာ.အတွက်ရှင်းရ.ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ရွှေက တပ်ထောက်ခံ.သူဆိုတာမှန်ပါတယ် လူတိုင်း…လွတ်လပ်စွာ အားပေးခွင့်ရှိ.ပါ…တယ်ဒါပေမဲ့ ဒီ.ကလူတွေက သူမ.တူ ရန်သူ.လုပ်တာ ကြောင့် ရွှေကို အမျိုး.မျိုးတိုက်ခိုက်နေ.ကြတာပါ
ဆင်ခြေ.ထောက်မလို့အမည်တွင်စေ.တဲ့ပုံကိစ္စကို.ပြောချင်ပါတယ် အဲ့ပုံက 2018.တုန်းက Novotel Hotelကပွဲတခုမှာရွှေရိုက်ထား.တာပါ…
လူတွေက Photoshotတွေနဲ့ပုံစံမကျ.အောင်ခြေထောက်နဲ့…. ရင်သား.နေရာတွေကို ပြင်ပြီးဖြန့်ထား.တာပါနော်ရွှေ…အခုမှမူလပုံ ပြန်ရှာ…တွေ့လို့ ပုံ.အတုနဲ့ အစစ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြ…ထားပါတယ်
ပုံအတုကိုယုံခြင်လဲ ယုံကြပါနော် မယုံရင် အပြင်မှာ…ဆုံရင် ခြေသလုံး.ကို စိတ်ကြိုက်လှန်ကြ.ည့်လို့ရပါတယ်နော် လူအချင်းချင်းလှည့်ပတ်ခြ.င်း ကင်း.ရှင်းကြပါစေ Credit
ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ ေမာ္ဒယ္ ေ႐ြ႐ူပါဦးကေတာ့ အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းမွာ ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္လို႔သူမကိုယ္သူမ ေျပာေနၾကေပမဲ့ ပရိသတ္ေတြ.ကေတာ့
သူမကိုတပ္ခ်စ္သူလို႔ပဲ သိထားၾကပါတယ္ေနာ္.တစ္ခ်ိဳ႕.ဆိုရင္သူ.မကို ခုမွျမင္ဖူးတာ.ဆိုၿပီးေတာင္ ေရးသားေနၾကပါတယ္။ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းတုန္း.ကေတာ့
သူမကို အဘေတြ.က စီစဥ္ေပးမႈတစ္ခုေၾကာင္ ခ်မ္းသာလာၿပီဆိုလို႔ လူေတြ..အၾကား ပြဲဆူသြားရျပန္ပါ.တယ္ေနာ္..အခုလဲ လူေျပာမ်ား.ေနတဲ့ သူမရဲ႕ေျခေထာက္ဟာ လူေတြ ထင္ေနသလို ဆင္ေျခေထာက္မဟုတ္ေၾကာင္းသက္ေသနဲ႕.တကြ ရွင္းျပလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္ သူမရဲ႕ ရွင္းျပတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပရိသတ္သိေအာင္ ျပန္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္
“ဆင္ေျခ.ေထာက္မ” ဆိုေသာ မသမာသူ.ေတြလုပ္ႀကံ.ထားတဲ့ကိစၥကို ေ႐ႊ ပထမဆုံးနဲ႕.ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕ရွင္း.ခ်င္ပါတယ္…
သိကၡာ.အတြက္ရွင္းရ.ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ေ႐ႊက တပ္ေထာက္ခံ.သူဆိုတာမွန္ပါတယ္ လူတိုင္း…လြတ္လပ္စြာ အားေပးခြင့္ရွိ.ပါ…တယ္ဒါေပမဲ့ ဒီ.ကလူေတြက သူမ.တူ ရန္သူ.လုပ္တာ ေၾကာင့္ ေ႐ႊကို အမ်ိဳး.မ်ိဳးတိုက္ခိုက္ေန.ၾကတာပါ
ဆင္ေျခ.ေထာက္မလို႔အမည္တြင္ေစ.တဲ့ပုံကိစၥကို.ေျပာခ်င္ပါတယ္ အဲ့ပုံက 2018.တုန္းက Novotel Hotelကပြဲတခုမွာေ႐ႊရိုက္ထား.တာပါ…
လူေတြက Photoshotေတြနဲ႕ပုံစံမက်.ေအာင္ေျခေထာက္နဲ႕…. ရင္သား.ေနရာေတြကို ျပင္ၿပီးျဖန႔္ထား.တာပါေနာ္ေ႐ႊ…အခုမွမူလပုံ ျပန္ရွာ…ေတြ႕လို႔ ပုံ.အတုနဲ႕ အစစ္ကို ႏွိုင္းယွဥ္ျပ…ထားပါတယ္
ပုံအတုကိုယုံျခင္လဲ ယုံၾကပါေနာ္ မယုံရင္ အျပင္မွာ…ဆုံရင္ ေျခသလုံး.ကို စိတ္ႀကိဳက္လွန္ၾက.ည့္လို႔ရပါတယ္ေနာ္ လူအခ်င္းခ်င္းလွည့္ပတ္ျခ.င္း ကင္း.ရွင္းၾကပါေစ Credit
တပ်ချစ်တဲ့ အဘသားသမီးတွေကတော့ အေးဆေးပဲဆိုပြီး ပုံလေးနဲ့သက်သေပြလာတဲ့ ယဉ်လတ်
ည၈နာရီကျော်လောက်ကသင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လေးက ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်သွားလို့လိုက်ကြည့်လိုက်သောအခါ